Kodzero-dzevanhu, 29 Kurume 2017
Chitatu 29 Kurume 2017
VaMutasa Vonakurira Nyoka Mhenyu Mukuru weVasori Vachiti Ndiye Mutyori weKodzero dzeVanhu
Vaimbova gurukota rinoona nezvevasori, VaDidymus Mutasa, vave kunakurira nyoka mhenyu kumukuru wesangano revasori reCentral Intelligence Organization, VaHappyton Bonyongwe, nemhosva yekutyora kodzero dzevanhu yakaitika muna 2008 nemuna 2013 panguva yesarudzo.
VaLuke Malaba Vanodomwa Kuve Mutongi Mukuru weMatare
Vamwe vanhu vanoti vari kufara nedanho ratorwa nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, rekudoma Justice Luke Malaba semukuru wevatongi vematare edzimhosva.
Kurume 28, 2017
Dare Rinomisa Sarudzo dzeBy-Elections Mukanzuru yeGweru
Nyaya yekudzingwa kwameya weGweru, VaHamutendi Kombayi, pamwe nakanzura Kenneth Sithole, yatora rimwe danho zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro nezuro muBulawayo rekusendeka parutivi sarudzo dzinofanirwa kuitwa dzekutsiva VaKombayi naVaSithole.
Vanhukadzi Vochema Chema neMhirizhonga Iri Kuwedzera Mudzimba
Vanorwira kodzero dzemadzimai vanoti kushungurudzwa kwevanhukadzi kuri kuramba kuchiwedzera kunyange hazvo hurumende yakaisa mutemo weDomestic Violence Act.
Kurohwa kwaCharles Manyuchi Kwoshamisa Vanhu Vakawanda muNyika
Vatsigiri vemitambo muZimbabwe vari kutyamadzwa nemaroverwo akaitwa Charles Manyuchi mumutambo wake wekudzivirira bhande rake resirivha reWorld Boxing Council.
Dare rePamusoro Ropa Amai Mukoko Mvumo yeKuendesa VaDidymus Mutasa Mbune kuMatare
Dare reHigh Court nemusi weMuvhuro rakapa mutongo wekuti zvakakodzera kuti vaimbova gurukota rinoona nezvevasori VaDidymus Mutasa vamiswe pamberi pematare vakazvimirira voga semunhu panyaya yavari kupomerwa nemutungamiri wesangano reZimbabwe Peace Project, Muzvare Jestina Mukoko.
Vakawanda Vanoti Havazivi Mashandisirwo Achaitwa Michina Mitsva yeBVR
Vane ruzivo vanoti BVR zvinoreva kunyoresa vanhu pachishandiswa mitezo yavo yakaita semifananidzo yavo, kana mitezo yavo yakaita sezvigumwe nezvimwe izvo zvinoiswa muma computer zviine nhamba dzako dzechitupa, gwaro rekuberekwa, nhamba dzako dzenhare mbozha, kero yepaunogara nezvimwe.
Madzimai eZanu PF Oratidzira Achiti Amai Sandi Moyo naAmai Mahoka Vadzingwe.
Masachigaro ematunhu ose gumi emunyika muboka reWomen's League yebato reZanu PF, vaungana nevamwe vatsigiri veZanu PF muBulawayo vachitsigira kuti Amai Eunice Sandi Moyo naAmai Sarah Mahoka vadzingwe muboka remadzimai.
VaBhasikiti Vozvionera Vega Huipi hweZanu PF?
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana zvikuru nekushungurudzwa, kunyimwa chikafu pamwe nekutyisidzirwa kwevanhu mudunhu reMwenezi East pamberi pesarudzo dzekukutsvaga achatsiva VaKudakwashe Bhasikiti, avo vakadzingwa mubato reZanu PF.
Muchuchisi Mukuru weNyika Otoreswa Mhiko Kunyange Paine Mutauro Wakawanda
VaAmos Chibaya Vanonyimwa Mukana weKubvisa Mari yeChibatiso
Kuti VaMnangagwa Vangaite Hurukuro naVaChamisa?